Talem-paritry ny Varotra Alaotra: « Aoka hisy tahirim-bary fiandry » | NewsMada
Talem-paritry ny Varotra Alaotra: « Aoka hisy tahirim-bary fiandry »
“Toa mbola ho lava ity toe-javatra ity, ka aleo hatao fomba fiasa raikitra ny hametrahan’ny Fanjakana”Tahiry fiandry”tsy tapaka”. Io no soso-kevitry ny Talem-paritry ny Varotra, ny Indositria ary ny Asa tanana aty Alaotra-Mangoro, Ramindo Judicaêl Flavien, tamin’ny resaka nifanaovana taminy, ny 19 janoary teo.
Faritra sokajina ho voalohany amin’ny famokarana vary ny any Alaotra. Mampidi-bola betsaka ho an’ny faritra ny kaominina ny tamberim-bidy azo amin’ny fivezivezen’ny vokatra, noho izany. Nilaza ny talem-paritry ny Varotra, Ramindo Judicaël Flavien, fa “nanopy maso tao amin’ny tamberim-bidin’ny vary lafo taty Alaotra aho, vao tsy ela akory izay. Nanan-tombo 30% ny tamberim-bidy niditra tamin’iny 2020 iny mitaha amin’ny azo tamin’ny taona 2019. Midika izany fa nitombo ny voka-bary taty Alaotra farany teo. Lafo, toy ny ao an-dRenivohitra ihany anefa no ivarotana ny vary fotsy aty amin’ny”Sompitra”: 630Ar ny kapoaka eto Ambatondrazaka!.”
Kely ny vary tavela aty Alaotra
Rehefa niangaviana hanome ny antony mahatonga izany ity Talem-paritra ity, nambarany fa angamba nety ho tsara ny voka-bary tamin’iny 2019-2020 iny, saingy matevina ny habetsaham-bary novidin’ny Faritra hafa taty Alaotra.Vokany, kely no tavela, namidy taty an-toerana ka niakatra ny vidiny. Fa izao koa: zava-misy mety hitoetra koa ity fiovan’ny toetr’andro ity. Mihakely ny rotsak’orana. Hatramin’ny oviana? Eo no mahatonga an’ity Talem-paritra ity hanao soso-kevitra ny amin’ny tokony hametrahana politika matotra tsara, dia ny fametrahan’ny fitondrana “Tahiry fiandry”. “Efa izy io fanafarana vary any ivelany io, dieny tsy mbola mirehitra ny tsy fahampiana, hoy ihany izy.”Fa ny vary vokarina eto an-toerana koa tokony hakàny hatao tahiry!”. Ny mpanjifa malagasy tokoa mantsy “mifidifidy” izay, satria misy tsy mahazaka ny vary vahiny “stock” sasany, lazaina mampangidihidy ny hoditra.